China Thiocyclam orinasa sy mpamatsy | Lemandou
Votoatiny (%) ≥50
Votoatin'ny rano (%) ≤2.0%
Fahamarinana (amin'ny siève fitsapana 44um),% ≥98
Bika Aman 'endrika Vovoka mavo mavo sy fotsy
Bibikely famonoana poizina sy mahomby be
Bibikely mifantina ny peratra famonoana bibikely
Fahavoazana haingam-pandeha haingam-pandeha, haingam-pandeha, mpamono otrikaretina maharitra, afaka mitondra hatrany an-tampony izy io mandritra ny fampiharana ny faka, fa tsy amin'ny fototra. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny famafazana ravina. Ny habetsaky ny spray dia 2.25 ～ 3.75g mpiorina miasa / hm, izay afaka mifehy karazan-javamaniry. Ny aretin'ny holatra sy ny aretina lo dia manana fiarovana sy fitsaboana. Izy io koa dia be mpampiasa amin'ny fitehirizana aretina ny voasary, paoma, poara ary akondro. Tsaboina amin'ny fanafody 500 ～ 1000mg / L sy 700 ～ 1500mg / L tsirairay avy izy io.
Araka ny GB 2760-2001 (g / kg): ny fitehirizana voankazo dia 0,02; voaroy tongolo gasy sy dipoavatra maitso dia voatahiry 0,01 (vola sisa ≤ 0,02).
Raha ny ambin'ny (mg / kg) notondroin'ny FAO / WHO (1974): ny citrus ≤ 10, akondro ≤ 3 (manontolo) na 0,4 (pulp voankazo).
Famonoana holatra sistemika
Izy io dia afaka misoroka sy mifehy ny aretin'ny holatra amin'ny zavamaniry isan-karazany. Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana voankazo sy legioma aorian'ny fijinjana. Izy io dia afaka misoroka aretina sasany izay mitranga mandritra ny fitehirizana. Nampiasaina be tany an-trano sy tany ivelany izy io. Ohatra, ny voasary dia alemana amin'ny ranon-javatra 500-1000ppm hisorohana ny penicillium sy ny bobongolo maintso mandritra ny fitehirizana, ny akondro dia alemana amin'ny rano 750-1500ppm mba hisorohana ny lo sy ny antracnose mandritra ny fitehirizana, azo alemana amin'ny paoma 500-1000ppm ihany koa izy , mananasy, voaloboka, frezy, laisoa, laisoa, voatabia, holatra, betiravy, ovy, sns., manakana ny aretina mandritra ny fitehirizana.
Ny aretin-drindrina sitrus dia mampiasa fampihenana 45% 1000-5000 mg / kg handemana ny voankazo mandritra ny 3-5 minitra, ary hitahiry azy amin'ny hafanana ambany mandritra ny 2-3 volana, ary mbola vaovao ihany.
Ny preservative an'ny akondro dia mampiasa fampiatoana 45% 500-700 mg / kg handemana ny voankazo mandritra ny 3 minitra, esorina dia ho maina, tahirizo amin'ny hafanana ambany, ary tazomy mandritra ny 1 volana mahery.
Akanjo voa voa bakanae misy vary mitentina 180-300 grama misy atiny mavitrika isaky ny 100 kg ny voam-bary, toy ny 300-500 grama ho an'ny vovoka 60% tsy azo vonoina ary 200-300 grama ho an'ny vovo-pisakafoanana 90%.
Ny fisorohana sy ny fitsaboana penicillium, antracnose, bobongolo volondavenona, scab, savony vovoka, sns. Ny paoma sy ny poars alohan'ny hijinja, esory amin'ny fanafody rano- 30-60 grama misy akora mavitrika isaky ny hektara.